बुटवलमा तयार भयो मुलुककै पहिलो ढुवानीग्राम - Mechikali News
बुटवलमा तयार भयो मुलुककै पहिलो ढुवानीग्राम
व्यस्त सहरभित्र हेवी लोडका गाडी निषेध
सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नमुना मोडल
बुटवल । बुटवलमा मुलुककै पहिलो र नमुना ढुवानी ग्राम निर्माण भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १२ ढवाहामा ट्रान्सपोर्ट भिलेज अर्थात् ढुवानीग्राम निर्माण भएको हो । उपमहानगरले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मुलुककै नमुना आयोजनाका रुपमा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउँदैछ ।
बुटवलको व्यस्त सहरी क्षेत्रमा हेवी लोडका सवारीसाधनलाई छिर्न नपर्ने र ट्राफिक अवस्था व्यवस्थित गर्न अलग्गै ढुवानी ग्राम बनाइएको हो । सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारीको योजनाअनुसार रुपन्देही परिवहन प्रालिसँगको सहकार्यमा उपमहानगरले ढुवानीग्रामको कामलाई बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अगाडि सारेको थियो । मुलुकको आर्थिक केन्द्रका रुपमा रहेको बुटवलको आर्थिक गतिविधिलाई अझ सहज, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले नमुना ढुवानी ग्राम निर्माण गरिएको उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको वडा नं.१२ ढवाहस्थित भैरहवा टोलमा रहेको ३ विगाहा क्षेत्रमाफलमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको करिब ३७ करोड लागतमा ढुवानीग्राम निर्माण भएको हो । संरचना निर्माणका काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ढुवानी ग्राममा रहने गार्डरुम, शौचालय, प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षा पोष्ट निर्माणका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने बाँकी कामको निर्माणकार्य लगभग पूरा भएको छ । संगसंगै शौन्दर्यकरणको काम पनि चलिरहेको छ ।
‘सहरमा ट्राफिक चाप बढाउने र अव्यवस्थित तवरले सञ्चालनमा रहेका ढुवानी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने, एकै ठाउँबाट हेवी लोडका गाडी अनलोड गराउनेगरी अलग्गै ढुवानीग्राम निर्माणको अवधारणा बनाएका हौं,’ प्रमुख सुवेदीले भने,‘निजी क्षेत्र (यहाँका ढुवानीग्राममा संलग्न व्यवसायीहरू) को समेत साझेदारीमा सुरु भएको योजना सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।’
वहुवर्षीय योजनाको रूपमा अगाडि सारेको अवधारणा अहिले साकार हुने अवस्थामा पुगेपछि उपमहानगर र यहाँका ढुवानी व्यवसायीहरु खुशी भएका छन् । प्रमुख सुवेदीले व्यस्त र भिडभाडयुक्त बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाले गरेको प्रस्तावमा निजी क्षेत्रले सहजै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले काम तोकिएको समयमै पूरा भएको बताए ।
नयाँ वर्षको सुरुमै शुभारम्भ गर्नेगरी तयारी गरिएपनि कोरोना महामारीको जोखिमले केही पर सरेको छ । हेबी लोडका ढुवानीका सवारीलाई अलग्गै ठाउँको व्यवस्था मिलाएपछि अब व्यवस्त सहरको ट्राफिक चाप कम हुने भएको छ । ठूला र भारवाहन ढुवानीका साधनहरूको आवतजावतले बुटवल बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनिरहेको अवस्थामा बजारदेखि टाढा रहेको क्षेत्रमा व्यवस्थित ढुवानीग्राम निर्माण भएपछि सहरी शौन्दर्यतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा मुलुकमै पहिलो नमुनाको रूपमा रहेको ढुवानीग्राम बुटवलको गौरवको योजना हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा यसप्रकारको अलग्गै ढुवानीग्राम मुलुकमा अन्यत्र नरहेको उपमहानगरको दाबी छ ।
ढुवानी व्यवसायीका अगुवा तथा समितिका पूर्वअध्यक्ष माधव नेपालले बुटवलको पहिचानका रुपमा नमुना अटो भिलेजपछि अब नमुना ढुवानी ग्राम बन्ने दाबी गरे । उनले लगानी सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता भएकाले नै आफूहरुले सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरेको बताए । उपमहानगरले गुरुयोजना नै बनाएर ढुवानी ग्राम निर्माणको काम सुरु गरेको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय शिवप्रसाद रेग्मीले बताए । उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बुटवलले अर्को नमुना कामको थालनी गर्न पाएको बताए ।
के–के छन् ढुवानीग्राममा ?
ढुवानी ग्राम राजमार्ग क्षेत्रबाट ३.६ किलोमिटर दूरीमा छ । उपमहानगरले त्यस क्षेत्रमा पुग्न पहुँचमार्ग, ढल तथा नाली निर्माण गरेको छ । थप वाइपास सडक निर्माण गरेर दानव नदी करिडोरमा जोड्ने तयारी भइरहेको छ । ग्राम नजिकै रहेको दानव नदीमा पुल निर्माण गर्ने र बाइपास सडकलाई विस्तार गर्ने बारेमा प्रमुख सुवेदीले प्राविधिकहरुको टोली लिएर त्यसक्षेत्रको निरिक्षणसमेत गरेका छन् । निरिक्षणमा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, वडाअध्यक्ष दुर्गा सुवेदी, टंकप्रसाद पराजुली, इन्जिनियर रुक्मागंत अर्याल, अधिकृत लक्ष्मी ढकाल, ढुवानी व्यवसायीहरुलगायतको सहभागिता थियो ।
उक्त ढुवानी ग्राममा साना ग्यारेजदेखि प्राथमिक उपचारकक्षसम्म निर्माण हुनेछन् । बिओटी मोडल (बिल्ड, अपरेट, ट्रान्सफर मोडल) मा ढुवानी ग्राम निर्माण भइरहेको छ । यहाँ ४९ वटा सेड निर्माण भएका छन् । उपमहानगरको साझेदारी गरेको रुपन्देही परिवहन प्रालिले एमबी कन्ट्रक्सनलाई करिब १३ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ढुवानी ग्राममा सामान अनलोड गर्ने अलग्गै सेडहरु, स्टोर कक्षहरु, कार्यालय, विद्युत्, खानेपानी, स्नानागार, शौचालय, विश्रामकक्ष, ढल तथा नाली, प्राथमिक उपचार कक्ष, सुरक्षागार्ड कक्ष, सूचना कक्ष निर्माण भइरहेको सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए ।
बुटवल मुलुकको आर्थिक केन्द्र हो । बृहत बुटवलको अवधारणासहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नमुना योजना साकार हुने चरणमा पुगेपछि साझेदारहरु खुशी भएका छन् । रुपन्देही परिवहन प्रालिका अध्यक्ष कमल घिमिरेले ढुवानी व्यवसायीहरु उत्साही भएको बताए । उनले बुटवलको नमुना प्रयासले आफूहरु उत्साही भएको र गौरवको आयोजना निर्माण सकिने चरणमा पुगेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर उपमहानगरले साझेदारीमो नमुना योजना सफल बनाएको बताए । ढुवानीग्राम निर्माण सम्पन्न भएपछि बुटवलका चोक तथा गल्लीहरूमा सञ्चालित ढुवानी व्यवसायी स्थानान्तरण हुनेछन् । ढुवानी ग्रामबाट साना सवारीले अन्यत्र सामान आसार्ने छन् । हेवी लोडका ठूला गाडी अब ब्यस्त बजार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने छैन । जसले विभिन्न क्षेत्रको लागि सामान ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई ढुवानीका सामान खोज्न सहज हुनेछ ।
ढुवानी व्यवसायीसँग १५ वर्षे सम्झौता
उपमहनगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा निर्माण भइरहेको ढुवानीग्रामलाई दिगो रुपमा सञ्चालनका लागि मापदण्डसमेत बनाएको छ । ढुवानी व्यवसायीसँग १५ वर्षे सम्झौता भएको छ । उपमहानगर र रुपन्देही परिवहन प्रालिबीच सम्झौता भएको हो ।
म्झौताअनुसार उक्त प्रालिले १५ वर्षपछि उपमहानगरपालिकालाई ढुवानी ग्राम हस्तान्तरण गर्नेछ । निर्माण सम्पन्नपछि ढुवानीग्राममा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले एक हजार पाँच सय ५० वर्ग फुट क्षेत्रफलमा निर्माण हुने प्रति सेडको मासिक तीन हजार एक सय रुपैयाँ बहाल रकम बुझाउने छन् ।
बहाल रकम प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको उपमहानगरमा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।